Kanaalka Disney ee aad ugu jeceshahay waxay ku soo noqdeen TV-ga YouTube ka dib markii heshiis cusub la gaadhay - 【Comparison】 2022
Kanaalka Disney ee aad ugu jeceshahay waxay ku soo noqdeen TV-ga YouTube ka dib marka heshiis cusub la gaadho
Gudub imtixaanada xisaabtaada 2aad ESO. buug-yaraha
Qorayaal kala duwan (qoraa)
Google iyo Disney waxay gaadheen heshiis u oggolaanaya in badan oo kanaalada Disney ah, oo ay ku jiraan ESPN iyo ABC, ay ku soo noqdaan YouTube TV, ka dib markii uu dhacay qandaraaskii u horseeday shirkadda baahinta inay ka noqoto adeegga.
Ka saarida kanaalka ayaa YouTube u horseeday inay si ku meel gaadh ah hoos ugu dhigto qiimihii ku biiritaanka TV-ga YouTube € 15 laga bilaabo € 64.99 ilaa € 49.99 bishii. qiimuhu waxa uu ku soo noqday qadar buuxa ka dib markii ay labada shirkadood ku heshiiyeen heshiis cusub.
Sida Verge uu soo sheegay, dhowr kanaal oo ay leedahay Disney, oo ay ku jiraan ESPN, National Geographic, iyo FX, ayaa hadda mar kale laga daawan karaa TV-ga YouTube ka dib markii si ku meel gaar ah meesha looga saaray. Bog internet-ka Google-ka la soo dhigay ayaa xaqiijinaysa in shirkaddu ay "sharafayn doonto hal mar credit dhammaan xubnaha ay saamaysay" marka loo eego qiimaha is-diiwaangelinta bishii oo si ku-meel-gaar ah hoos ugu dhici doona $49,99.
"Waan ku faraxsanahay inaan soo sheegno in hakad kooban ka dib, aan la saxiixanay heshiis qaybin cusub Google TV-ga YouTube si loo sii wado qaybinta galka shabakadahayada," afhayeen u hadlay Disney ayaa u sheegay The Verge.
"Waxaan qiimeyneynaa iskaashiga Google-ka si loo gaaro garoon-ciyaareed sinnaan la'aan ah suuqa, waxaanan ku faraxsanahay inaan helno khadkeena adag ee ciyaaraha tooska ah iyo barnaamijyada wararka, iyo sidoo kale barnaamijyada madadaalada ee carruurta, qoysaska iyo carruurta. Guud ahaan waxa loo soo celinayaa macaamiisha TV-ga YouTube ee dalka oo dhan «.
Sidaa darteed, tani waa dhibaato laga fogaaday isticmaalayaasha sida joogtada ah u daawan jiray kanaalada ay Disney leedahay ee YouTube TV. Oo haddii aad ka walaacsan tahay biilka bishii oo gaadhaya € 64,99, YouTube waxay xaqiijisay in qiimo dhimista € 49,99 ee hal mar ah ay si toos ah u khusayso biilka soo socda ee dhammaan macaamiisha lacag bixinta. In yar oo hadiyad Christmas ka Google, waxaan u malaynayaa.
Waxay ahayd bil adag guud ahaan adeegyada baahinta, Google-na ma ahayn shirkadda kaliya ee u halgamaysa dib u cusboonaysiinta heshiisyada iyo soo celinta soo jiidashada suuqa. Roku waxa kale oo uu orod adag kula jiray Google horaantii bisha iyada oo shirkada weyn ee teknoolajiyada loo qorsheeyay in ay ka saarto abka YouTube-ka ee Roku Channel Store.
Nasiib wanaag, labada dhinac waxay awoodeen inay gaaraan heshiis daqiiqadihii ugu dambeeyay u soo diray YouTube TV iyo abka YouTube dib ugu celinta aaladaha Roku, laakiin madalku wuxuu leeyahay dhibaatooyin joogto ah oo ku saabsan cusboonaysiinta taas oo ka tagtay Netflix iyo Disney Plus apps inay joojiyaan. .
Si kastaba ha ahaatee, waxaan ku faraxsanahay in YouTube TV uu haysto dhammaan awoodihiisa Disney ee goobta kaliya ee Christmas-ka. Waxaan kalsooni ku qabnaa in qaar badan oo ka mid ah aaladaha baahinta ugu wanaagsan, sida Dabka TV Cube, ay si baahsan u isticmaali doonaan xilliga fasaxa, iyo helitaankaaga aaminka ah ee waxyaabaha Disney ee TV-ga YouTube waxay u badan tahay inay nafis u noqon doonto qaar badan.
Heshiisyada ugu wanaagsan ee TV-ga YouTube ee xilligan